जनयुद्धलाई 'कुहिएको फर्सी' भन्दा कसरी मन थामिएला ओली मण्डलीमा बिराजमान जनयुद्धका कमरेडहरुको ? - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ बिचार ∕ जनयुद्धलाई ‘कुहिएको फर्सी’ भन्दा कसरी मन थामिएला ओली मण्डलीमा बिराजमान जनयुद्धका कमरेडहरुको ?
जनयुद्धलाई ‘कुहिएको फर्सी’ भन्दा कसरी मन थामिएला ओली मण्डलीमा बिराजमान जनयुद्धका कमरेडहरुको ?
फणीन्द्र फुयाल ज्वाला २०७७, पुस २६ गते १४:४४ मा प्रकाशित
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तल्लो स्तरमा झरेर गाली गलौज गर्न थालेका छन् । ओलीका राजनीतिक गुरु मदन भण्डारीले भन्ने गर्थे ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैनन्’ । तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कामचलाउ सरकार हाँकिरहेका ओलीमा मदन भण्डारीले भने जस्तो आदर्श लागू भएको देखिदैन । जनताको मत पाएर सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली यतिबेला संसद विघटन गरेर जनताको मतमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न उद्दत छन् । ओलीको स्वेच्छारी कदमले संविधान केवल कागजको खोस्टा बनिरहेको छ भने राजनीतिक सहयात्रीहरुलाई उनले स्थायी शत्रुको झैँ व्यवहार गरिरहेका छन् । अहिले ओलीका भाषण सुन्दा यस्तो लाग्छ प्रचण्ड–माधवलाई उनले स्थायी शत्रु ठानिसके !
जनयुद्धमाथि यत्रो अपमान र अपब्याख्या भइरहँदा जनयुद्ध लडेका पूर्व माओवादी मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, मणि थापा, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीहरु किन चुपचाप छन् ? के उनीहरुलाई मन्त्रीको जागिर भन्दा जनयुद्धप्रतिको गर्व, जनयुद्धको स्वाभिमान, जनयुद्धको उपलब्धीहरुको माया लाग्दैन ? केपी ओलीले भोलि संविधान मिचेर अर्को अध्यादेश ल्याउँदै संघीयता खारेज गरे भने जनयुद्ध लडेका मन्त्री कमरेडहरुले त्यसलाई पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने ?
ओलीको भाषण सुन्दा अझ यस्तो लाग्छ, अव उप्रान्त प्रचण्ड–नेपालसँग कार्यगत एकता पनि हुने छैन, आगामी दिनमा दल निकट भातृ संस्थाहरुको निर्वाचनमा संयूक्त मोर्चा पनि बन्ने छैन । यहीँनेर आएर मदनको ‘जवज’ र ओलीले भन्ने गरको ‘जवज’मा मेल खाँदैन । ओलीले केवल मदन भण्डारीको नाम बेचेर सत्ताको आयु लम्ब्याई मात्र रहेका छन् ।
उखान तुक्का प्रयोग गरेर भाषण गर्ने ओली यतिबेला संविधान बिरोधी कृयाकलापहरु गरिरहेका छन् । हुनै नसक्ने गरी आगामी वैशाखका लागि चुनावको मिति जवर्जस्त तोकिएका छ । यस्तो लाग्छ, उनको बोली व्यवहारले भोलिका दिनमा कुनै पनि राष्ट्रिय एजेण्डामाथि वामपन्थीहरुसँग कार्यगत एकता र कुनै पनि भातृ संगठनका निर्वाचनहरुमा एलायन्ससमेत गर्ने छैनन् ।
विश्व ईतिहासका पानाहरुमा भेटिन्छन्, फ्रान्सका तत्कालीन राजा लुई चौधौँले म नै राज्य हुँ, देशका नीति, बिधि, कानून म र मेरा लागि केही होइनन् भन्ने आशयका अभिब्यक्ति पटक पटक दिन्थे र त्यही अनुसारको व्यवहार गर्थे । तर एक दिन ती वादशाह पनि जनताको अगाडि तासको घर जस्तै भताभुङ्ग भएर ढले ।
ठ्याक्कै त्यस्तै शैलीको व्यवहार कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री कपी ओलीबाट पटक-पटक हुने गरेको छ ।
कहिले दुइवटा नटबोल्ट खिया लागेर आफैँ खुस्किए भन्ने, कहिले सुन्तला खाने भए सल्लाघारीतिर होइन सुन्तला घारीमा जानुपर्छ भन्ने, कहिले डेरावालाले घर दावी गरे भन्ने, कहिले भान्सामा ढाडे बिरालो पसेको भन्ने, हुँदा हुँदै ओलीले काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा भएको आफूनिकट गूटको भेलामा जनयुद्ध ‘कुहिएको फर्सी जस्तै भयो’ भनेर अराजनीतिक र गएगुज्रेको भाषण गरेर आफ्नो बचेखुचेको शाख पनि गिराउने काम गरेका छन् ।
केपी ओलीले पछिल्लो पटक प्रयोग गरेको यो तुक्का आम लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष, संघीयता, र समाजवादउन्मुख नेपाल र नेपाली जनताको लागि खेदजनक छ । जुन युद्धकै कारण ओलीलाई पटक-पटक शत्तारोहण गर्ने शौभाग्य मिल्यो, जुन युद्धकै कारण राजतन्त्रको अन्त्य भयो, जुन युद्धकै कारण जनता सचेत बने आज त्यही युद्धलाई ओलीहरु सत्तामा पुगेपछि तिरस्कार गर्दैछन् । अझ त्यही युद्ध लडेका सिपाहीहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा नराखि उनको सत्ताको स्वाद लिने ध्येय पुरा भएन, आज त्यही जनयुद्धप्रति ओली विष बमन गरिरहेका छन् ।
व्यक्ति हत्या गरेर चौध वर्ष जेल परेका भनिएका केपी ओलीले जनयुद्धलाई हत्याको खेल र त्यसमा सहभागीहरुलाई हत्याराको संज्ञा दिन यदि खोजेका हुन् भने उनी चाहिँ झापा बिद्रोहमा कसरी दूधले नुहाएको भन्न सकिएलार ?
त्यसैले, महान् र युगान्तकारी परिवर्तनहरु सम्भव तुल्याउने जनयुद्धप्रति गरिएको कुप्रचार, अपब्याख्या र तिरस्कार सहेर मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै आगामी वैशाखसम्मको तीन महिने पद गुजार्ने कि अहिले नै आमजनताको पक्षमा सडकमा आउँने ? यो निर्णय लाल कमरेडहरुकै !
कामचलाउ सरकारका प्रम ओलीले जनयुद्ध फर्सी झैँ कुहियो भनिरहँदा त्यही जनयुद्ध लडेका मन्त्रीहरु बादल, टोप बहादुर, मणि, प्रभु, लेखराज कसरी त्यो अपमान सुनेर जागिर खान सकेका होलान् ? गल्ती भयो भनेर आउनुहोस् अझै पनि तपाईहरुलाई जनताले माफि दिनेछन् । नत्र वैशाख पछि आफैँ फर्किनुपर्दा झन नमिठो हुनेछ कमरेड !
ट्याग : #badal, #breaking, #hot, #kp oli, #mani thapa, #nekapa, #prabhu shah, #top bahadur
मनाङलाई स्थलमार्गसँग जोड्न सडक मर्मतको काम सुरु
सिद्धबाबामा ढुङ्गाले लागेर जीपका सहचालकको ज्यान गयो